EditShare EFS Storage Solutions နှင့်အတူဆစ်ဒနီတက္ကသိုလ်မှလေ့လာသင်ယူသည့်မီဒီယာအဖွဲ့သည် 4K ကိုသွားသည် NAB သတင်းများ | 2020 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show ၏ထုတ်လုပ်သူဖြစ်သည်။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
ပင်မစာမျက်နှာ » သတင်း » ဆစ်ဒနီသင်ယူမီဒီယာအဖွဲ့တက္ကသိုလ် EditShare EFS နဲသိုလှောင် Solutions နှင့်အတူ 4K သွား
Basingstoke, ဗြိတိန် - မေလ 31, 2019 - EditShare®တစ်အသိဉာဏ်စကေးထွက်သိုလှောင်မှု, မီဒီယာပိုင်ဆိုင်မှုစီမံခန့်ခွဲမှု (ပေးခဲ့သည်) တွင်နည်းပညာခေါင်းဆောင်နှင့် automated အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု (AQC), ယနေ့ဆစ်ဒနီတက္ကသိုလ် (ဆစ်ဒနီ uni), သြစတြေးလျအများပြည်သူသုတေသနနှင့်သင်ကြားရေးတက္ကသိုလ်သောသင်ယူမီဒီယာအဖွဲ့ထုတ်ပြန်ကြေညာ ရွေးချယ်ထား EditShare သူတို့ကို 300K အတွက်အရည်အသွေးမြင့်မားသောဗီဒီယိုအကြောင်းအရာထုတ်လုပ်ရန်ဖို့ဝယ်လိုအားနှင့်တွေ့ဆုံရန်ကိုကူညီ XStream EFS နဲ4။ Digistor တစ်ခု EditShare သြစတြေးလျမှာရှိတဲ့အရာရှိတဦးကကုန်သည်, တပ်ဆင်ခြင်းလွယ်ကူချောမွေ့ရန် site ပေါ်တွင်ဖြစ်ခဲ့သည်။
1850 ခုနှစ်တွင်စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီး, ဆစ်ဒနီတက္ကသိုလ်သြစတြေးလျ၏ပထမဆုံးတက္ကသိုလ်ကြီးနှင့်ကမ္ဘာ့ဦးဆောင်တက္ကသိုလ်ကြီးတစ်ဦးအဖြစ်မှတ်ယူသည်။ အဆိုပါတက္ကသိုလ်ကဘွဲ့, မာစတာနှင့်ပါရဂူဒီဂရီကမ်းလှမ်းရာမှတဆင့်ကိုးစှမျးနှင့်တက္ကသိုလ်ကျောင်းတွေ, ပါဝင်သည်။
တွမ် Cavdarovski, ရေးအဖွဲ့, ဆစ်ဒနီတက္ကသိုလ်ကရှင်းပြသည်မှာသုတေသနနှင့်လေ့လာရေးမီဒီယာထုတ်လုပ်ရေးကိုပို့ဆောငျ "ငါးကျွန်ုပ်တို့၏အဖွဲ့သည်နိုင်ငံတကာနှင့် On-ကျောင်းဝင်းကျောင်းသားများကိုနှစ်ဦးစလုံးအတှကျပညာရေးဗီဒီယိုများထုတ်လုပ်ရန်နှင့်, သင်ယူမီဒီယာအဖွဲ့ 4K အတွက်အရည်အသွေးမြင့်ကဗီဒီယိုတွင်ပါဝင်သောအကြောင်းအရာများကိုကြီးထွားလာဝယ်လိုအားတွေ့ဆုံရန်နိုင်ရန်အတွက်လွန်ခဲ့သည့်သုံးနှစ်အတွင်းလျှင်မြန်စွာကြီးထွားလာခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏အမွေကိုတိုက်ရိုက်ပူးတွဲသိုလှောင်မှု (Das) စနစ် multi-စီမံကိန်းအတွက်ပတ်ဝန်းကျင်အတွက်အလုပ်မလုပ်ဖို့ဒီဇိုင်း, ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းအသွားအလာချောမွေ့နှင့်တည်ဆဲတက္ကသိုလ်စနစ်များနှင့်အတူပေါင်းစည်းလိုတဲ့ဗဟိုမီဒီယာအဖြေရှာဖို့ကျွန်တော်တို့ကိုကူညီပေးဖို့ Digistor မှလှည် ့. မခံခဲ့ရပါဘူး။ "
သူကဆက်ပြီး, "Digistor ရဲ့ထောက်ခံချက်အပေါ်အခြေခံပြီးကျနော်တို့ကရှေးခယျြခဲ့ EditShare XStream EFS နဲ 300 Node 96TB စနစ်။ ဤသည်အသုံးဝင်သောသိုလှောင်မှု 82TB တစ် 10GB Ethernet RJ45 switch သည်နှင့် Flow မီဒီယာပိုင်ဆိုင်မှုစီမံခန့်ခွဲမှု၏ 10 လိုင်စင်ပါဝင်သည်။ အဆိုပါ EditShare ကျွန်တော်နိမ့်ဆုံးစီမံခန့်ခွဲရေးဆိုင်ရာ overhead နဲ့အတော်လေးအသေးစားနှင့်ရိုးရှင်းသော set ကိုတက်ပြီးနောက်ခဲ့ကြသည်အဖြစ် XStream တစ်ခုစံပြဖြေရှင်းချက်ဖြစ်ခဲ့သည်။ ဒါဟာအစအလွယ်တကူလုံလုံခြုံခြုံနဲ့ကြံ့ခိုင်ခဲ့ဆာဗာအသစ်သေချာကျွန်တော်တို့ရဲ့လက်ရှိအိုင်တီစနစ်များနှင့်အတူပေါင်းစည်း။ ကျနော်တို့နှစ်ဦးစလုံးတစ်ဦးကို Mac နဲ့ Windows ပတ်ဝန်းကျင်ရှိသည်နှင့်ပြီး Thunderbolt converter နဲ့ကြောင် 6A ကေဘယ်လ်ကြိုးကနေတစ်ဆင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ခုနစျပါးကို client စက်တွေနဲ့ချိတ်ဆက်ဒါကြောင့်သစ်ကို EditShare XStream system သည်ပွုတျောမူသော, ဒီပတ်ဝန်းကျင်အတွင်းချောမွေ့စွာအလုပ်လုပ်နိုင်ပါလိမ့်ခဲ့ရတယ်။ "
အဆိုပါသင်ယူမီဒီယာအဖွဲ့ရဲ့စီမံကိန်းများကိုတဦးတည်းအနေဖြင့်တစုံတယောက်သောသူသည်အချိန်တွင်ထုတ်လုပ်လျက်ရှိခြောက်ဆယ်ဗီဒီယိုများဘယ်နေရာမှာမဆိုရှိနိုင်ပါသည်, လူအပေါင်းတို့သည့်အချိန်တွင်မဆိုအသင်းကိုမဆိုတဦးတည်းအားဖြင့် edited ခံရနိုင်ဖြစ်ရပါမည်။
Cavdarovski ကရှင်းပြသည်, "ဒီအဖွဲ့ကယခု Creative Cloud ထဲမှာအဓိကအားအလုပ်လုပ်တယ်အပေါင်းတို့နှင့်စီမံကိန်းများအတွက်ဘုံတင်းပလိတ်များနှင့်တံဆိပ်ပိုင်ဆိုင်မှုများကိုသုံးပါ။ ဒါဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့ယခင် Set-up နှင့်အတူလုပ်ဖို့မဖြစ်နိုင်ပါဖြစ်ခဲ့သည်။ Flow မီဒီယာပိုင်ဆိုင်မှုစီမံခန့်ခွဲမှု (ပေးခဲ့သည်) အသုံးပြုခြင်းအားဖြင့်ကျနော်တို့အခုနေ့စဉ်အခြေခံပေါ်မှာငါတို့လုပ်ငန်းစဉ်များချောမွေ့။ ကျွန်တော်ပထမဦးဆုံးကျွန်တော်တို့ရဲ့ထုတ်လုပ်မှု output ကိုတက်တချက်မှတစ်လိုအပ်ချက်များကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာလုပ်ခဲ့တယ်သောအခါ, ကျနော်တို့သဟဇာတစနစ်များနှင့်ပရိုတိုကောကိုဖြတ်ပြီးဖိုင်များကိုစီမံခန့်ခွဲဖို့ကြိုးစားနေတန်ဖိုးရှိသောအချိန်ဆုံးရှုံးခဲ့ကြသည်သိသာခဲ့ပါတယ်။ အသစ် EditShare EFS နဲဖြေရှင်းချက်အကျိုးရှိစွာနှင့်ထိရောက်သောဖြစ်ခြင်းအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ကိုအချိန်ကယ်တင်တော်မူ၏။ "
ဗီဒီယိုများပေါ်တွင်အလုပ်လုပ်ကိုင်သည့်အခါအသင်း၏အဓိက input ကို 4K ဗီဒီယိုနှင့် Podcast တခုကိုအသံဖိုင်တွေကိုပါဝင်ပါသည်။ သူတို့ဟာ Blackmagic URSA နှင့်စတူဒီယိုကင်မရာများနှင့်အတူရိုက်ကူး, Sony က FS7, Panasonic က GH4 နှင့်5DSLR, OSMO နှင့် Mavic မောင်းသူမဲ့လေယာဉ်ကင်မရာများ။ သူတို့ရဲ့ပေးပို့ output ကို 1080p သည်နှင့် Youtube, Coursera နှင့် Arc ကဗီဒီယိုပလက်ဖောင်းအပါအဝင် web-based လိုင်းများလည်းပါဝင်သည်။
သူကထပ်ပြောသည် "EditShare ကျွန်တော်အတော်လေးနိမ့်ကုန်ကျစရိတ်ခဲ့ကြောင်းအဖြေတစ်ခုလိုအပ်အတိုင်းဤကျွန်တော်တို့ကိုရန်အရေးကြီးပါသည်ခဲ့ - ဆာဗာကို run ဖို့အချိန်ပြည့်ဆောင်ရွက်သောဝဘ်ဆိုက်နည်းပညာရှင်မလိုအပ်ခဲ့ဘူးတဲ့ခိုင်မာတဲ့စနစ်အားကိုယ်စားပြုသည်။ အဆိုပါ XStream မော်ဒယ်လည်းအယ်ဒီတာများအရည်အသွေးမဆိုသိသာသုံးနေပြီသို့မဟုတ်စေ့စပ်ညှိနှိုင်းခြင်းမရှိဘဲ 4K ဖိုင်တွေမှတဆင့်ပွတ်တိုက်နိုင်စေရန်အမြန်နှုန်းနှင့် throughput ရှိခဲ့ပါတယ်။ ကျနော်တို့ဖို့လိုအပ်မယ်ဆိုရင်ရလဒ်အဖြစ်ယခုကြှနျုပျတို့ကိုအလွယ်တကူ proxies ကိုမှညှိနိုင်ပါတယ်, ဒါပေမယ့်ယေဘုယျအားဖြင့်ကျနော်တို့တည်းဖြတ်၏အစောပိုင်းအဆင့်များအတွက် 4K preview ကိုအရည်အသွေးကိုမှာကိုသုံးနိုင်သည်။ "
Cavdarovski ယင်းအဆိုအရ EditShare စိတ်ကျေနပ်မှုလက်ရှိလိုအပ်ချက်များကိုမသာပေမယ့်သူကကောက်ချက်ချအဖြစ်အလွန်တန်ဖိုးကဆက်ပြောသည်ပြီ, "ကျွန်တော်တို့ရဲ့ EditShare မီဒီယာဆာဗာကိုယခုငါတို့ကမေးပါများနှင့်လည်းသိသိသာသာကျွန်တော်တို့ရဲ့ output ကိုတိုးမြှင့်ထားပြီးအရာအားလုံးကိုပါဘူး။ ကျနော်တို့အချိန်ပေါ်မှာငါတို့ကြီးမားသောဗီဒီယိုစီမံကိန်းများကိုပို့ဆောင်နေကြသည်ကျနော်တို့မရှိတော့ထုတ်လုပ်မှုပိတ်ဆို့မှုများရှိသည်။ ဒါဟာကျွန်တော်တို့ကိုပိုကောင်းတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖောက်သည်လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းကြောင့်မြင့်မားတဲ့အရည်အသွေးကိုဗီဒီယိုများဖန်တီးခြင်းအတွက်အချိန်ပိုမိုရင်းနှီးမြှုပ်နှံရန်အဖွဲ့နိုင်ပါတယ်တဲ့ကုန်ကျစရိတ်ကိုချွေတာပေးသည်။ "
ယင်းအပေါ်ပိုမိုသိရှိလိုပါက EditShare XStream EFS နဲအပေါင်းတို့နှင့်တကွ, အခြားအ EditShare ထုတ်ကုန်သွားရောက်ကြည့်ရှုကျေးဇူးပြုပြီး www.editshare.com.
Digistor ဒစ်ဂျစ်တယ်ပိုင်ဆိုင်မှုများ၏ဖန်တီးမှု, စီမံခန့်ခွဲမှု, သိုလှောင်မှုနှင့်ဖြန့်ဖြူးဘို့ဖြေရှင်းချက်ပေးပါသည်။ စစ်ဆင်ရေးထုတ်လွှင့်ဖို့ Post-အဆောက်အဦကနေတစ်ခုတည်းစတူဒီယိုကနေအခန်းကိုဖြတ်ပြီးသို့မဟုတ်ကမ္ဘာတစ်လွှားလည်ပတ်ပူးပေါင်း, ကွန်ယက်ပတ်ဝန်းကျင်မှာရန်, Digistor စမတ်နည်းပညာနှင့်ဝန်ဆောင်မှုဖြေရှင်းချက်မှတဆင့်၎င်း၏ဖောက်သည်အာဏာ။
Aurora ကနျြးမာရေးကင်ပိန်း / ကိုလိုနီထောက်ခံ AQC ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ ဘော့ကုဒ်မြှပ်သွင်းကိရိယာ တည်းဖြတ်ခြင်း EditShare EditShare XStream ဂရေဟမ်ချပ်မန်း Prmoted toEditor mamma မီဒီယာပိုင်ဆိုင်မှုစီမံခန့်ခွဲမှု အသံလွှင့်ကုန်တင်ကားအပြင်ဘက်တွင် SoftAtHome, MStar, CES2017 လှံ & Arrows ကိုလိုနီ / ချီကာဂို TVU ကွန်ယက် က Ultra HD ဖိုရမ် ဆစ်ဒနီတက္ကသိုလ် ဗီဒီယိုကိုအင်ဂျင်နီယာချုပ် XStream EFS နဲ 2019-05-31
ယခင်: အသက်ပြင်းပြင်းရှူပါ။ // အသက်ရှူရုံ Got တောင်မှပိုမိုသက်သာ
နောက်တစ်ခု: အနောက်ကမ်းခြေကိုယ်စားပြုမှုအဘို့အရိပ်လက္ခဏာများကို T-ကိုယ်စားလှယ်များနှင့် DiMaggio ကိုယ်စားပြုမှု reverse